DEG DEG:- Ciidanka Somaliland oo xabsiga u taxaabay seddax qof oo ka mid ah urur diimeed cusub – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidanka Somaliland oo xabsiga u taxaabay seddax qof oo ka mid ah urur diimeed cusub
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa waxay sheegayaan in ciidanka booliska maamulkaasi ay goordhaw xabsiga u taxaabeen seddax qof oo ka mid ah koox diimeed la magac baxay “Al-Saaddicuuna Bil Xaq”.
Kooxdaan “Al-Saaddicuuna Bil Xaq” ayaa toddobaadkii hore looga dhawaaqay dalalka Masar, Soomaaliya, Kuweyt iyo Liibiya, waxaana lagu eedeeyay inay yihiin koox takfiir ah oo gaaleysiisa dadka muslimiinta ah.
Taliyaha ciidanka booliska ee maamulka Somaliland C/laahi Fadal Iimaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadkaan lasoo xiray kadib amar kasoo baxay maxkamadda maamulkaasi.
Wuxuu taliyaha sheegay in dhawaan dadkaasi maxkamad lasoo taagi doonno, si wax looga weydiiyo howlaha ay ku guddo jireen.
Dhinaca kale, culimadda Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa digniin kasoo saaray urur diimeedkaan cusub, iyagoona ku baaqay in kooxdaan aan lagu kadsoomin islamarkaana laga digtoonaado.
Sidoo kale, culimadda ayaa waxay sheegeen in kooxdaan ay yihiin qeyb ka mid ah firqada “Takfiirka” oo meelo badan oo caalamka ah ka jirta, iyagoona sheegay inay sanadihii lixdameeyadii kasoo aas-aasmeen xabsiyada dalka Masar, kadibna ay soo galeen meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya.